EBESIBATHANDA ASEBESILAHLEKELE: SIKHUMBULA UKARIMA BROWN (1967-2021) | Scrolla Izindaba
EBESIBATHANDA ASEBESILAHLEKELE: SIKHUMBULA UKARIMA BROWN (1967-2021)
Uzalelwe emzabalazweni, waba yizwi elingenakho okwesaba emkhakheni wobuntatheli
UKarima Brown wazalwa enguKarima Semaar e-Mitchell’s Plain ngowe-1967. Waqala ukuthanda umzabalazo kusukela esemncane elandela ubaba wakhe u-Achmat owayengumholi womphakathi kanye nesishoshovu se-ANC.
Ngowe-1980, ngesikhathi efunda eNyuvesi yaseNtshonalanga yeKapa, waba yingxenye yobuholi be-South African Students Congress.
Wayengomunye wesizukulwane sezintatheli ezazigxile emzabalazweni wenkululeko futhi ezathatha izimfundiso sazo kwezepolitiki ezweni elisha lokusakazwa kwezindaba ngemuva kwentando yeningi ngowe-1994.
Okhulumela umndeni u-Eusebius McKaiser uthe, uKarima ubelwela umphakathi olinganayo kusukela esemncane.
Kodwa-ke, kwesinye isikhathi wayesolwa ngokuba ngumsakazi we-ANC – futhi wagxekwa ngowe-2015 ngesikhathi ethwetshulwa egqoke imibala ye-ANC emhlanganweni wezepolitiki.
Kodwa indlela kaBrown yokukhuluma ngokukhululekile kanye nesifiso sakhe sokubuza yonke into ngaso sonke isikhathi kwakumenza athathwe njengomuntu owaziyo umsebenzi wakhe. Ngaphezu kwalokho, wayenokuqonda kwangaphakathi kweqembu elibusayo ezweni.
Ubengasabi futhi ezimisela ukuthathana nosopolitiki, abahleli bamaphephandaba kanye nabanye abantu abasezikhundleni.
Ngesikhathi sokhetho lwango-2019, uBrown washayisana nomholi we-EFF uJulius Malema okwaholela ekutheni abalandeli be-EFF baphendule ngokuthumela izinsongo zokudlwengulwa kanye nokubulawa kwakhe ku-Twitter ngemuva kokuthi uMalema ekhiphe inombolo yakhe. UBrown wahambisa uMalema ne-EFF enkantolo futhi waliwina icala.
UBrown wakuchaza njengokujwayelekile. “Ngeke ngihlukunyezwe nge-inthanethi futhi angeke ngiphathwe ngusopolitiki, kubandakanya noMalema,” esho.
UBrown ubephethe ezinye zezikhundla ezibaluleke kakhulu emithonjeni yezindaba yaseNingizimu Afrika, ezifana ne-Business Day, kwi-Independent Media naku-Radio 702.
Noma kunjalo, umshado wakhe waphela ngenkathi kuvela ukuthi umyeni wakhe wangaphambili wayesebenza njengenhloli yobandlululo – okuyinto ayekade engayazi.
UBrown ubephethe uhlelo i- “Fix it” ku-eNCA lapho abaziwa khona ngezingxoxo zakhe ezinamandla nemibuzo eqavile abeyibuza osopolitiki.
Wangeniswa esibhedlela emasontweni ambalwa edlule kunzima nokuphefumula.
Umndeni wakhe ukhiphe isitatimende ekuqaleni kaLwesine esithi: “Ngokudabuka okukhulu sazisa umphakathi ukuthi udadewethu kanye nomama wethu esimthandayo uKarima Brown udlule emhlabeni namhlanje ekuseni. Ushone ngenxa yezinkinga ze-Covid-19.”